Tababare Louis Van Gaal Oo Afar Xiddig bartilmaameedsan doonna K/Adduunka kadib
HomeSuuqaTababare Louis Van Gaal Oo Afar Xiddig bartilmaameedsan doonna K/Adduunka kadib
Tababaraha cusub ee kooxda Man United Louis Van Gaal ayaa ugu dambeyn nafta duldhigi doona saxeexa afar xiddig oo la sheegay inuu doonayo inuu xagaagan ku arko garoonka Old Trafford, xilli macallinkan uu ku mashquulsan yahay isku diyaarinta xulkiisa Holland ee koobka adduunka.
Sida laga soo xigtay majaladda Express Sport, xiddiga khadka dhexe ee Roma Kevin Strootman ayaa ah shaqsiga koowaad ee macallinkan ahmiyadda siin doono, kaasoo uu doonayo inuu ku xoojiyo xiddiga khadka dhexe ee kooxda Man United xagaaga soo socda.
Sidoo kale wararka qaar ayaa sheegaya in macallinka Holland Van Gaal uu doonayo laacibka khadka dhexe ee Bayern Munich Bastian Schweinsteiger inuu khadka dhexe ee United kula lammaaniyo Strootman.
Van Gaal ayaa sidoo kale doonaya inuu iska adkeeyo dhanka difaaca ee kooxda, waxaana uu ku hormari doonaa difaaca kooxda Borussia Dortmund Mats Hummels, isagoo xiddigan u arka inuu bedel u noqon karo difaacyada ka tagaya Unite ee Nemanja Vidic iyo Rio Ferdinand.
Tababare Van Gaal ayaa sidoo kale eeganaya xiddiga kooxda dynamism ee Yevhen Konoplyanka, kaasoo bartilmaameed u ah kooxda Ingiriiska ee Liverpool iyo Tottenham.
Man United ayaan xagaaga ka qeyb gali doonin koobabka Yurub, waxaana Tababare Van Gaal uu doonayaa inuu dib u dhis weyn ku sameeyo kooxda.
Ronaldo Oo Seegi Doona Kulanka Atlético Madrid
26/01/2015 Abdiwahab Ahmed
Cruyff Oo Fasiraad Ka Bixiyey Sababta Qaab-Ciyaareedka Neymar Hoos Ugu Dhacay
Guardiola Oo Qorshaynaya In Manchester City ay Iibsato Marcelo iyo Coutinho
26/02/2016 Abdiwahab Ahmed